दोस्रो जीवन? र त्यो खुसी? यो तपाईं एक उपहार के र दोस्रो मौका वा सम्झनाहरु कि निरन्तर बढिनै कालो रंग सबै majeure टिप्पणीहरू को दुखाइ संग incommensurable दिनुभयो भनेर थाह पाउँदा आनन्द छ? र एक लाख ज्यान लागि पछिल्लो भनेर रंग ... परमेश्वरको कुनै आश्चर्य हामीलाई केही पृथ्वी पापी मा यहाँ रहन अर्को मौका दिन्छ। तपाईं ... सबै बुझ्न, महसुस गर्न आफ्नो जीवनमा केही परिवर्तन गर्न, आवश्यक पर्दछ, तर शायद ती जो योग्य ... हामी अब एक चमत्कार बारेमा कुरा गर्दै छन् - एक मानिस एक विमान दुर्घटना जीवित र आफ्नो नाम - Sizov Aleksandr Borisovich।
उहाँले एक जन्म मानिस बसोबास जो शहर - Zhukovsky
Zhukovsky, एक पूर्व बगैचा शहर र अब विज्ञान को शहर, एक धेरै राम्रो नागरिक ... बरु, यो व्यक्ति सधैं थियो फेला छ, तर यो एक rebirth अनुभव छ। यहाँ उहाँले बसोबास आज अलेक्जेन्डर Sizov , सेप्टेम्बर 7, 2011 मा एक विमान दुर्घटना बाँचे - को ईन्जिनियर विमान सञ्चालन। यो दिन सधैं विशेष ती जो हकी सम्बन्धित छ, उत्सुक हुनेछौं महसुस हुन्छ, शोक घुम्टोमा हङ छ। को याक-42, Yaroslavl जवान हकी खेलाडीको महिमाको टोली पूरा crackdown लिए, तर उहाँले सामान्य मोडमा पृथ्वीमा भूमि किस्मत थिएन। यी समलिङ्गी मान्छे, आशा रूसी हकी - Yaroslavl टोली "लोकोमोटिव" - क्लब "डायनेमो" (मिन्स्क) खेल्न गए। Tunoshonka नदी संसारमा आफ्नो अन्तिम घरबार ठाउँ भए ...
प्रकोपबाट यस्तो साँस, पैदल, खाने, पिउने रूपमा, केही मा लगी भएको छ अलेक्जेन्डर Sizov पछि, अनुकूल गर्न, जान बल फेला परेन। एक भाग्यमानी तारा अन्तर्गत जन्म, उहाँले साक्षात्कार, उहाँले बिर्सनुभयो खोज्छ सबै सम्झना गर्न धेरै गाह्रो छ दिन छैन पत्रकार सँग कुराकानी गर्दैन। विशेष गरी दुर्घटना पछि पहिलो वर्ष मा मिडिया ध्यान जोगिन। आफ्नो परिवार, 2011 प्रचार shunned ... सेप्टेम्बर 7। कसैले पनि यो मिति सधैं कुनै पनि तरिका मा खेल, विशेष गरी हकी सम्बन्धित जो सबैका लागि कालो रंग मा चित्रित छ कल्पना। र Sizov अलेक्जेन्डर Borisovich किनभने आफ्नो जिम्मेवारी पूरा को, त्यो विमान airworthy जाँच गर्नु पर्छ, धेरै चिन्तित छ। र याक-42 सबै ठीक थियो। के भयो? आधिकारिक संस्करण मानव कारक संकेत गर्छ।
कि भयानक दिनमा Sizov को चालक दल मा, यो पुच्छर मा यात्रा थियो थिएन र fastened थिएन। खैर, धेरै कस्नु छैन आफूलाई - कि सुरक्षित छ भन्ने विश्वास। अलेक्जेन्डर पत्नी भनिन्छ र यसो भने: "मिन्स्क मा आइपुग्यो - प्रकार"। यो बिरामी-fated याक-42, को रनवे पारित गरेको छ जमीन मा झिकेर र यो हावा मा भयो। पहिले नै एउटा आपतकालीन अवस्था! अलेक्जेन्डर Sizov प्रकोपबाट पछि टेकओफ पछि, विमान banked कि र मिस्त्री दुर्घटना बचा सकिँदैन भनेर बुझ्न सक्छ, चेतना हराएको सम्झे। यसबाहेक, नदी, सबै स्ट्रोक मा थियो, तर उहाँले उठेँ र बाँचे र डुबा वा बाल्न सक्छ ... भंग, सर्जरी, संस्थान Sklifosofskogo। तर केही भयो, र अहिले अलेक्जेन्डर Sizov पत्नी Svetlana र छोरा Anton संग मास्को बसोबास। को मास्को संस्थान मा छोरा अध्ययन। Sizov, यो काम गर्दछ, एक कार ड्राइव पैदल जाने यो एक साधारण जीवन जान्छ - समय सबै निको पार्नुहुन्छ, र घाउ बिस्तारै कडा।
कसरी र कहाँ अलेक्जेन्डर आज बसोबास
नजिकै घर Sizov, Gagarin सडक मा स्थित छ जो, एक सिनेमा "उदय" छ। एक तीतो विडंबना, वा रहस्यवादी - यो के हो? यस्तो घटना असम्भाव्य छ पछि मान्छे हावा मा उठ्नेछ। तर जो आफ्नो पेशा को धेरै वर्ष दिनुभयो जीवित उडान परिचर अलेक्जेन्डर Sizov, केवल टिप्न र छोड्न सक्नुहुन्छ। उहाँले उड छैन, तर आफ्नो गतिविधि ईन्जिनियरिङ् सेवा विमान संग जोडिएको छ: YAkovlev Sizov मा विमान काम।
पाँच तले Xruschevka यस्तै अरूबाट कुनै फरक छ। Sizov दुई-कोठा अपार्टमेन्ट को शीर्ष तल्ला मा बसोबास। यो घर मा, आफ्नो पत्नी र छोरा संग अलेक्जेन्डर लामो मर्मतको समाप्त गर्न चाहन्थे थियो। एक भयानक विमान दुर्घटना पत्नी पछि Sizov भद्रगोल कि Svetlana प्रार्थना गरे। मर्मत र काम, र प्रेम र क्षमा गर्ने क्षमता: - एक व्यक्ति जीवित छ भने त्यो को केहि सक्षम छ। उहाँले रातो बिरालो, उहाँले पाहुना गर्न प्रेम छ। र एक दुर्लभ साक्षात्कार मा अलेक्जेन्डर आवश्यक यसलाई आफ्नो परिवार को प्रेम उहाँलाई बच्न अनुमति, र केवल आफ्नो पत्नी Svetlana Aleksandr Sizov, अब आफ्नो खुट्टा मा, दुर्घटना बाँचे गर्ने को समर्थन धन्यवाद छ कि उल्लेख ...
, घरेलू उड्डयन बारेमा, अलेक्जेन्डर "Superjet" को महत्वपूर्ण कुरा यो पैसा बर्बाद छ भनी विश्वास। वा laundered। कसले, त्यसलाई भने, रूसी उड्डयन उद्योग बारेमा सबै कुरा थाहा? वास्तवमा, यहाँ र केही अनुमान।
त्यो भयानक दिन
अलेक्जेन्डर छ निन्दाले गर्न केही - यो एक उडान इन्जिनियर र सेवा इन्जिनियर liners छैन रूपमा तिनले ककपिट मा हुन मानिन्छ थिएन। आफ्नो कार्य - जमीन मा जहाज को उडान को लागि सबै तयारी गर्न, तर हावा मा। र चालक गरेको सानो घर एक उडान हुन Sizov कुनै आवश्यकता थियो। "स्वस्थ" यो विमान पूर्ण, बिल्कुल सामान्य छ ": र उनको पत्नी उडान अघि भन्नुभयो।
प्रकोपबाट पछि अलेक्जेन्डर Sizov बारम्बार शरीर केरकार गरे। उहाँले फेब्रुअरी 12, 2015 अदालत गर्न बोलाए, तर कल सूचित को प्रक्रिया मा भाग लिन इन्कार थियो। स्वास्थ्य समस्या उल्लेख, तर वास्तवमा उनले थप केही भन्न। अरू के Sizov बताउन सक्नुहुन्छ पाइलटहरूले को कार्यहरू सफाइ रूपमा - हो, आधिकारिक संस्करण अनुसार, पाइलटहरूले को ब्रेक पेडल मा बढाने जब हवाइजहाज थिचिएको? अलेक्जेन्डर, आफ्नो गवाही मा, airliner दाबी उहाँले उपकरण सामान्यतया सञ्चालन सबै छैन भन्नुभयो। यसबाहेक, विमान समान रूप लोड थियो - सबै नियमहरु पालना गर्न सही सामान आवास बसिरहेका। को लाइनर एन्टिनाको बिकन किन collided गर्नुभयो?
एक चिकित्सा रूपमा मनपर्ने काम
"पछिल्लो बिस्तारै मिलेका छ", - अलेक्जेंडर भन्छन् Sizov उडान परिचर बाँचे। यी भयानक अनुभव र sleepless रात कहाँ छन्? हरेक दिन उहाँले आफ्नो आफ्नै OKB मा, यो दिन एक्स देखि हटा, उहाँले दोस्रो जन्म पाउँदा बिताउनुहुन्छ। तर प्राण अन्त निको प्राप्त। निराश, idleness, खैरो विचार बाट: - काम यो सबै मानिसहरूलाई के बचाउँछ छ। विशेष गरी मनपर्ने। सिरियल - प्रयोगात्मक डिजाइन ब्यूरो, ए एस Yakovlevym द्वारा सिर्जना, विमान दुई भन्दा बढी सय प्रकार, तिनीहरूलाई एक सय उत्पादित। बस यो विचार: 70 000 याक 70 वर्ष भन्दा बढी निर्माण - सबै रूसी डिजाइन ब्यूरो बीच एक रेकर्ड। र आज हुनत रूसी उड्डयन उद्योग खराब हालत छ, र कोष एक नयाँ वर्ष उपहार रूपमा आउँछ - एक दुर्लभ आश्चर्य, तर यो साँच्चै प्रतीक्षा Sizov छैन कहीं जा छ। उहाँले आफ्नो कारण वफादार छन् र अन्त गर्न आफ्नो भूमि खडा गर्ने ती मध्ये एक हो। EDB धेरै प्रतिभाशाली डिजाइनर, ईन्जिनियर, उत्पादन लाइन कर्मियों र ईन्जिनियरहरु को अभिभावक हो। हाम्रो नायक - उडान इन्जिनियर - - यो ग्यालेक्सी को एक, र मान्छे ठ्याक्कै अलेक्जेन्डर Sizov जहाँ थाहा आफ्नो हात राख्नु, सबै कुरा क्रममा छ, विमान प्रयोगको लागि फिट छ। यो विवेक र टीम को गर्व कार्य गर्दछ।
ब्यूरो नयाँ विमान को विकास मा प्रगति को लागि एक इनाम पाउनेछ। 41-45 वर्ष को युद्ध समयमा। उहाँले सम्मानित गरियो लेनिन को आदेश (1942) र 1944 मा रातो ब्यानर को आदेश। OKB विशेषज्ञहरु, जो अहिले अलेक्जेन्डर Sizov, समानान्तर काम नयाँ प्रविधिहरू को प्रयोगमा रूपमा विज्ञान संगठन ठूलो प्रतिष्ठा आनन्द र ब्यूरो अझै पनि खडा गर्दैन र आदेश विमान नियन्त्रण प्रणाली को नयाँ मोडेल, साथै ईन्जिनियरिङ् समाधान शुरू। ब्यूरो विमान को उच्च विश्वसनीयता प्रत्याभूति छ त, सेवा संगठन, रक्षा मंत्रालय संग राम्ररी काम गर्दछ। यसलाई कसरी खराब, को बिरामी-fated याक हुन सक्छ? विशेष गरी यी जहाज मात्र होइन रूस मा धेरै देशहरूमा, मा प्रयोग गरिन्छ।
शान्ति प्रत्यक्ष गरौं!
अलेक्जेन्डर Sizov पछि प्रकोप भयो लामो पुनर्वास। पछि scars अनुभव र बस शारीरिक छैन। उहाँले धेरै प्लास्टिक सर्जरी, घाँटी, छाती गरे फिर्ता - जीवित ठाउँ, भाँचिएको हड्डी थियो। हो, प्लास्टिक शारीरिक कमजोरीहरू समाधान र प्राण गर्ने निको हुनेछ? उसलाई comrades को मृत्यु बारे सपनाहरू देखेर रोक्न लामो समय हुनेछ ... समय निको हुनेछ? उनी र उनको परिवारले भने शायद प्रश्न र शक संग एक्लै हुनेछन् र अनुमान bothering रोक्न। शान्ति बस्न र अरूलाई निर्भर हुन - आखिर, सबैलाई शान्तिमय जीवन सही छ स्वतन्त्रता हुन्छ। र कसैले अन्य को स्वतन्त्रता छिन्न सही छ।
अन्ना Isaikina: जीवनी र व्यक्तिगत जीवन
Marat Bashar: Filmography लोकप्रिय रूसी अभिनेता। Marat Basharova संग सिनेमा
Cervicalgia - यो पीडादायी र गम्भीर छ ...
स्वाद कफी स्क्रब
गति सेन्सर आफ्नो हातले ज्योति अन गर्न कसरी बनाउने। ताराहरु रेखाचित्र
एक ल्याप्टप र एक पीसी मा विन्डोज 10 को लागि CPU तापमान तपाईं कसरी थाहा छ?